Jawaabta qalbiga taabanaysa ee uu Paul Pogba ka bixiyey cunsuriyaddii lagula kacay, xilli uu soo qaatay xaaskiisa iyo tusaalooyin kale!! – Gool FM
(Manchester) 23 Agoosto 2019. Kubadda cagta casriga ayaa saldhig u noqatay cunsuriyad, mana jirto garab istaaga loo sameyay dhammaan xiddigahaasi la kulmay midab-takoorkaas, balse waaba lagu sii madeysaty xiddigahaas.
Horyaalka English Premier League waa mid ka mid ah horyaallada ugu cunsuriyadda badannaa xilliyaddii ugu dambeeyay, waxaana uu rikoorka cunsuriyadda ka wareegi rabaa horyaallada, Jarmalka, Faransiiska & si la mid ah Talyaaniga oo ahaa sanadihii ugu dambeeyay horyallada laga buuxiyay cunsuriyadda.
Waxa aynu warbixintaan ku eegi doonnaa sababtii loo cunsuriyeeyay Pogba, Jawaabtii uu ka bixiyay oo qalbiga tabanaysa iyo falcelintii ay kooxdiisa ka bixisay hadallada lagu isir faquuqay wiilka madow ee qiimaha qaliga ah uu fadhiya, waxaana warbixintaan soo jeedinaya Wariyaheenna Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho.
Falaqeynta kulanka caawa horyaalka Serie A ee Kooxaha Parma iyo Juventus… (Ka bogo kulammada furitaanka horyaalka Talyaaniga)